Xukuumadda Rooble oo shaacisay inuu Lafa-gareen ka qeyb galayo Shirka Muqdisho - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Xukuumadda Rooble oo shaacisay inuu Lafa-gareen ka qeyb galayo Shirka Muqdisho - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xukuumadda Rooble oo shaacisay inuu Lafa-gareen ka qeyb galayo Shirka Muqdisho
Xukuumadda Federalaka ayaa shaacisay caawa inuu socdo qabanqaabada shirka Wadatashiga Muqdisho e uu ku baaqay Ra’iisal wasaaraha, isla markaan uu kasoo qeyb galayo Madaxweynaha K/Gabeed oo hore u qaadacay.
Afhayeenka XFS Maxamed Ibraahim Macalimuu oo war ka soo saaray shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa sheegay in maalaha soo socda uu shirkaasi ka furmayo Muqdisho, isla markaana ay joogaan madaxda afar mamul goboleed.
Afhayeenka ayaa sidoo kale shaaciyey in Madaxweynaha K/Galbeed oo ah halka Madaxweyne ee Muqdisho ka maqan oo dhawaan imaanayo, si uu uga qeyb galo shirka.
“Waxa socda diyaar-garowga furitaanka shirka Gollaha Wadatashiga Qaran ee uu iclaamiyay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo Muqdisho ka furmo maalmaha dhow ee innagu soo aaddan,” ayuu yiri Afhayeenka Xxukuumadda.
Qoraalka Macalimuu ayaa intaas ku sii daray, “Shirka ayaa waxa lagaga hadli doono dardargalinta doorashooyinka iyo dhameystirkooda.
Waxa magaalada Muqdisho ku sugan Madaxweynyaasha Dowlad Goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug, Puntland iyo Jubbaland. Madaxweynaha Koofur Galbeed ayaa la filayaa in isaguna uu soo gaaro Muqdisho.”
Previous articleXOG: Maxaa kala qabsaday Rooble iyo Wasiirada taageersanaa Farmaajo? (Shirkii Golaha Wasiirada)
Next articleRW Rooble oo kulan la yeeshay Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland (Sawirro)